မြန်မာ-တရုတ် ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းများ လာမည့်မေလတွင် အပြီးသတ်မည် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မြန်မာ-တရုတ် ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းများ လာမည့်မေလတွင် အပြီးသတ်မည်
Kosoe Win shared The Myanma Age‘s photo.
ယင်းပိုက်လိုင်းများသည် တရုတ်၏ စွမ်းအင်လိုအပ်နေပြီးမဖွံ့ဖြိုးသေးသော အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသများကို ဖွံ့ ဖြိုးစပြုမည်ဟု သိရသည်။ NO မြန်မာမဖွံ့ဖြိုးသေး
မြန်မာ-တရုတ် ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းများ
ပေကျင်း၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ။
တရုတ်ပြည်၏ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမြောက် လမ်းကြောင်း များဖြစ်သော မြန်မာ-တရုတ် ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းများသည် စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင် နေ မည် ဆိုပါက လာမည့် မေ ၃၀ ရက်နေ့ တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ အပြီးသတ်မည်ဟု ဆင် ဟွာ သတင်းက ဖေါ်ပြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတော်ရေနံ ကော်ပိုရေးရှင်း China National Petroleum Corporation (CNPC)၏ လက်အောက်၌ ပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်း တည်ဆောက်နေသည့် စီမံကိန်းပရော ဂျတ်၏ အကြီးအကဲကောက်ကျန်းကွာက ပိုက်များသွယ်တန်းမှုမှာ နေရာတော်တော် များများ၌ ပြီးစီးနေပြီး ဇွန်လဆန်းပိုင်းတွင်ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ များ ပေးပို့ နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်း သည်။
မြန်မာဘက်ခြမ်း၌ အဓိကနေရာများတွင် တည်ဆောက်မှုများပြီးစီးနေပြီး၊ တရုတ်နယ်စပ်တွင်ရှိသော ပိုက်လိုင်းများမှာ ယခုလအတွင်း ပြီးစီး မည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
တရုတ်သည် ၎င်းဝယ်ယူထားသော အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှရေနံစိမ်းများကို အန္တရာယ်များပြီး လမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့တတ်သော မလ္လကာ ရေလက်ကြားမှ တင်သွင်းခြင်းအစား၊အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒ ရာ မှတဆင့် မြန်မာသို့ သင်္ဘောဖြင့်တင်ပို့ပြီး၊နိုင်ငံဖြတ်ကာ ပိုက်လိုင်းဖြင့် ရေနံတင်ပို့ မည်ဖြစ်သည်။
အရှည် ၁,၁၀၀ ကီလိုမီတာအရှည်ရှိသော ယင်းပိုက်လိုင်းများသည် မြန်မာအနောက်ပိုင်း ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းမှ တရုတ်ပြည် ယူနန်နယ်ရှိ ရူလီအထိ သွယ်တန်းထားသည်။
ရေနံပို့သည့်ပိုက်လိုင်းမှာ တစ်နှစ်ရေနံတန်ချိန် ၂၂ သန်း ပို့လွှတ်ပေးနိုင်ပြီး သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပို့သည့်ပိုက်လိုင်းမှာ တစ်နှစ်လျှင်ဓါတ်ငွေ့ ကုဗမီတာ ၁၂ဘီလီယံ ပမာဏအထိ ပို့ပေးနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းပိုက်လိုင်းများသည် တရုတ်၏ စွမ်းအင်လိုအပ်နေပြီး မဖွံ့ဖြိုးသေးသော အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသများကို ဖွံ့ ဖြိုးစ ပြုမည်ဟု သိရသည်။
This entry was posted on January 21, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ(၃၆၂)နှင့် (၃၆၃) နှင့် ဘာ သာသာသနာ
Maungdaw, Arakan State: Burma’s border security force (Nasaka), are looting ,committed sexual insults against Rohingya women →